Sida Loo Qarxiyo Safarada Macaamiishaada | Martech Zone
Sida loo Qarxiyo Safarada Macaamiishaada
Talaado, Janaayo 24, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Horumar weyn oo ku saabsan falanqaynta suuq geynta iyo dukumiintiyada ayaa soo ifbaxay khariidadaha safarka macaamiisha si looga caawiyo dukumiintiga, cabbiraadda, iyo hagaajinta waxtarka suuqgeyntaada - gaar ahaan khadka tooska ah.
Waa maxay Khariidadda Safarka Macaamiilku?
Khariidadda safarka macaamiisha ayaa ah sida aad ugu arki karto khibrada macaamiishaadu ku leedahay astaantaada. Khariidadda safarka macmiilku waxay dukumiintiga ka dhigeysaa dhibcaha taabashada ee macaamiishaadu khadka tooska ah iyo qad la'aanta iyo dukumiintiyada sida aad u cabireyso waxtar kasta oo taabasho. Tani waxay awood u siineysaa suuqleyda inay si fiican u fahmaan sida macaamiisha ay kula macaamilayaan si aad u wanaajin karto safarka macaamiisha, ka saari kartid meelaha banaan iyo jidgooyooyinka, si loo kordhiyo qanacsanaanta macaamiisha, kaqeybgalka, beddelaadda iyo fursadaha kor u kaca.
Si ka duwan sida funaanadaha macaamiisha oo qumman, safarada macaamiisha ayaa tusi kara waddooyin fara badan halka ay macaamiisha go'aannada ka gaarayaan iyo falcelinta la macaamilka calaamadaha. Khariidadaha safarka macmiilku sidoo kale waxay ka caawin karaan kooxdaada suuq-geynta inay xoogga saaraan xayeysiintaada iyo horumarinta waxyaabaha ku saabsan shakhsiyaadka macaamiisha gaarka ah. In kasta oo ay macaamiishaadu yeelan karaan leexasho iyo leexasho aan xad lahayn, waxaa jira wadooyin isku mid ah oo isku mid ah oo aad ka heli doontid in macaamiisha ay u socdaalayaan (ama aad rajeynayso inay hoos u socdaalaan).
85% ee suuqleyda heerka sare waxay rumeysan yihiin inay aad muhiim u tahay in la abuuro safar macaamiil oo isku dhafan, laakiin kaliya 40% ayaa dhab ahaan isticmaala ereyga safarka macaamiisha. Kaliya 29% shirkadaha shirkadaha ayaa qiimeeya naftooda wax ku oolka ah abuurista safarka macaamiisha.
Ururi xogta falanqaynta jirta boggaaga Analytics, madal suuq geyn ah, CRM, xogta iibka, iyo ilo kale.
Isu ururi xogta aan la soo koobi karin laga bilaabo kormeerka warbaahinta bulshada iyo jawaab celinta macaamiisha si loo daboolo dareenka iyo muhiimadda xogtaada falanqaynta.
Isku dar dhibcaha xogta marxalado gudahood jadwal (dhabarka) kaas oo ku daraya isdhexgalka sida weydiimaha, isbarbardhiga, iyo go'aamada. Ku dar dadaalkaaga suuq-geynta dhibic kasta.
Fasira xogta oo falanqee marxalad kasta ama taabasho si safarku u sahlanaado, u dhakhso badan yahay, ama uga raaxo badan yahay.
Salesforce waxay soo saartay muuqaalkan quruxda badan, Khariidadaha Safarka Macaamiisha: Sida Loogu Hago Hoggaamintaada Macaamiisha, si loo muujiyo habka diiwaangelinta safarada macmiilkaaga, qeexida marxalad kasta, iyo ku-dabaqista jaangooyooyinka ku habboon mid kasta oo ka mid ah heerarkaas.
Khibrad Safarada Macaamiisha ee Iibka
Tags: falanqaynta xogta macaamiishadhibcaha xogta macaamiishaSafarka macaamiishakhariidadaha safarka macaamiishakhariidada macaamiishabaraha macaamiishahanuuniyohagayaalsida loomuujinta xogta macaamiishaiibinwaxa
In ka badan 100 Qorayaal ayaa Aqoontooda kula wadaaga Buugga Ganacsiga Fiican